Pat Barone - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn ၏ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်စေသလဲ
ဘယ်လို Porn ကိုဖျက်ဆီး Relationships, Pat Baron အားဖြင့်
ညစ်ညမ်းနေရာတိုင်းယနေ့ဖြစ်ဟန် - ကြော်ငြာအတွက်, အွန်လိုင်းက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဖုန်းက app များကိုပေါ်တွင်ဖန်သားပြင်ကြော်ငြာ nauseum ပေါ်မှာ။ ထိုလွယ်ကူစွာမကြာခဏအကြီးအကျယ်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူများစွာသောစုံတွဲများအချင်းချင်းအတူအပြန်အလှန်လမ်းကိုစိန်ခေါ်သည်။
porn သည်ယနေ့အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုတွင်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအသင်းကနံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု ၇၀ ရာနှုန်းသည်အလုပ်ခွင်တွင်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည် အလုပ်ရှင်ရဲ့အင်တာနက်ကတဆင့်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၃၀ နှစ်ကြားအမျိုးသား ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်အလုပ်ခွင်၌ညစ်ညမ်းခြင်းကိုကြည့်ရှုကြောင်း၊ အသက် ၃၁ မှ ၄၉ နှစ်ရှိအမျိုးသား ၇၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်အလုပ်ခွင်၌ကြည့်ရှုသည်ဟုပြောဆိုကြသည်။
ဒါကအလုပ်အကိုင်အအန္တရာယ်တွေအများကြီးပါပဲ။ ဆရာဝန်များနှင့်ကုသ Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (PIED) အတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးတိုးပွားလာပြုမူဆက်ဆံအဖြစ်သို့သော်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို porn ကြည့်ရှု၏အခြားတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နေသည်။
တဦးတည်းအမှတ်, ဖွစျတဲ့တာ Thompson က (မသူမ၏အမည်ရင်း), အသက်အရွယ် 30 မှာ St.Louis, Missouri မှ, အချောဆရာဝန်နှင့်အတူသူမ၏အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးဟာအစဉ်အဆက်အစစ်အမှန်အရာသို့လှည့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ဦးကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမမခဲ့စေလိုကြောင်း။
Thompson ကနေဆဲအဖြစ်သူ့ကိုဖော်ပြထားတယ် "ငါသည်အစဉ်အဆက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးချင်ပါတယ်အရှိဆုံးစုံလင်သောကောင်လေး။ " သူကပညာတတ်ခဲ့ပါတယ်, ယဉ်ကျေးမှု, ရယ်စရာ, အလွန်အမင်းအသိဉာဏ်နှင့်အလွန်ကောင်းသော-ကြည့်ရှုပါ။ အဲဒီဖော်ပြချက်သို့သော်၎င်းတို့၏တတိယနေ့စွဲများအတွက်သူမ၏ပွငျဆငျခွငျးမပွုခဲ့ပါ။
ဒါဟာသူ့ရဲ့အကြိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်သည်အထိ "နမ်းသာမိနစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်သူသည်အိပ်ရာပေါ်မှာငါ့ကိုတွန်း, ငါ့ကိုသုတ်သင်ကူညီပေးခဲ့သည်, ထို့နောက်ငါ၏ကိုယ်စီစဉ်ခဲ့သည်။ သူဟာကုလားထိုင်၌ထိုင်နှင့် masturbating စတင်ခဲ့သည်။ ပထမတော့ငါဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါ။ သူ့မျက်စိတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ပုံရိပ်ဖတ်ရွေ့လျားမှုသို့ပြောင်းရွှေ့သကဲ့သို့ငါတဖြည်းဖြည်းသူ့ကိုကျွန်မကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ခဲ့ကြောင်း, သဘောပေါက်လာတယ်။ "
သုတေသန porn ပတ်သက်. ထိခိုက်မှု / မခိုဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ထွန်းသစ်စဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဆေးသမားလည်း disassociated အသုံးပြုသူများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများကိုမြင်လျှင်နေကြသည်။ ဘဝနှင့်စစ်မှန်သောဖက်များအနေဖြင့်အတွေ့အကြုံများအရစဲဖြစ်ပါတယ်သူယောက်ျားမိန်းမရဲ့အစားအဆက်မပြတ်အလိုတော်မှာပြောင်းလဲသွားတယ်နိုင် nameless နှင့်မကြာခဏ faceless focal အရာဝတ္ထုမှတဆင့် arousal တွဲဖြစ်ပါတယ်။
"ငါဆက်ဆံရေးများအကြားတစ်ဦး '' အာကာသကိုင်ဆောင်သူ '' အဖြစ်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးခဲ့သည်ထင်ပေမယ့်အခုအားလုံးတစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ "
ယင်းမက်စ် Planck အင်စတီကျုမှလေ့လာမှုကဦးနှောက်၏အပျြောအပါးစင်တာ (ထို striatum) သိသိသာသာမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
1992 မှာတော့ယောက်ျားအသက်အရွယ်5နှင့်အငယ်အစီရင်ခံဖော်ပြထားအခက်အခဲတစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့ကသာ 40 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုတွေမှာပြသထားတဲ့ - အဆိုပါကိန်းဂဏန်းယခု 33 ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကလူတစ်ဦးရဲ့အလုံးစုံကျန်းမာရေး, အဝလွန်ခြင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောအကြီးမားဆုံးအချက်များဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်ကျန်းမာယောက်ျားဟာသူတို့ရဲ့ပညာရေးများအတွက်အကြောင်းပြချက်အဖြစ် porn မှာညွှန်ပြနေကြသည်။
သူကိုခေါ်မိန်းမအားလက်ထပ်သည့်အခါဆရာယောဟနျ Vargos (မကသူ့အမည်ရင်း) အတွက်, အသက် 28, အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ၏, erectile ကိစ္စများအထိပြသ "ဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်။ "
"ငါသည်နှစ်ပေါင်းများစွာနေ့စဉ် porn ကို အသုံးပြု. ခဲ့," ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ဂျိန်းနဲ့ကျွန်မတစ်ဦးအားလပ်ရက်ရုဇ်အပေါ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ နောက်နှစ်ကျော်သောအခါကျွန်တော်တတျနိုငျသကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုမွငျလြှငျ, ကြှနျုပျတို့ဆိတ်ကွယ်ရာခဲ့ကြသည်သောအခါငါ porn ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့တူညီသောမြို့တှငျနထေိုငျနှင့်အတူတကွအတွက်ပြောင်းရွေ့တဲ့အခါအဆုံးသတ်မယ်လို့ယူဆ။ "
ယောဟနျသပြောင်းရွှေ့ - ဒါပေမဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသူတစ်ဦးစိုက်ထူလာပြီသို့မဟုတ်သူ့ဇနီးများအတွက်လိင်ကိစ္စခံစားချက်တွေကိုရှိခြင်းအတွက်အခက်အခဲတွေ့ကြုံ။
"ငါသည်ကိုယ့်ဂျိန်းနှင့်အတူအချို့သောဆိုးအတွေ့အကြုံများပြီးနောက်ငါခိုလှုံရာမြှင့်တင်ရန်ဇာတ်ခင်းရှိခြင်းခဲ့သည်။ ငါကိစ္စမရှိခဲ့ဘူးချင်ပါတယ်နဲ့ကျွန်မထိန်းချုပ်မှုထဲကခံစားရတယ်။ ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်ပြီးတာနဲ့ကျွန်မဒါအစာရှောင်ခြင်းပျင်းခဲ့ပါတယ်။ "
"ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုဆက်ဆံရေးအကြား 'အာကာသပိုင်ရှင်" အဖြစ်သုံးခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ဆက်ဆံရေးကိုလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး "ဟုသူကပြောသည်။
သူ့ဇနီးကလေးနှစ်ယောက်, ဒါသူတို့အပေါ်မှာကြမ္မာငင်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏သက်ရောက်မှုသူ့ကို haunts ။
ဘာဘရာဆောင်းရာသီ, Ph.D ဘွဲ့ကိုတစ်လိုင်စင်ရစိတ်ပညာရှင်နှင့် Boca Raton, ဖလော်ရီဒါအတွက်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းလိင်စွဲကုထုံးလူငယ် PIED နှင့်အတူရုန်းကန်ယောက်ျားအဖြစ်ကထိခိုက်မိန်းမ, စုံတွဲများဆကျဆံတယျ။
စွဲစွဲသူများစွာသည်သူတို့၏ရုပ်ပုံများကိုပြောင်းခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သူတို့ဖန်တီးနိုင်သောအမျိုးမျိုးကိုစွဲလမ်းကြသည်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများသည်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းအမျိုးသမီးများသည်အလားတူတုံ့ပြန်မှုမျိုးကိုပြုလုပ်နေကြသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဘုံလိုအပ်ချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြသည်။ ယနေ့အလွန်အလုပ်များလွန်းသောစိတ်ဖိစီးမှုများသောလူနေမှုပုံစံသည်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရန်အချိန်အနည်းငယ်သာကျန်ရှိနိုင်သည်။ Rocco Amazzi (သူ၏အမည်ရင်းမဟုတ်ပါ)၊ အသက် ၃၂ ​​နှစ်အရွယ်၊ နယူးယောက်၊ Long Beach ရှိအသက် (၃၂) နှစ်အရွယ်တွင်ကလေးထောက်ပံ့မှုနှင့်အိုမင်းနေသောမိဘများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအလုပ်နှစ်ခုလုပ်ကိုင်သည်။
“ ကွန်ပြူတာကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုငါလုံးဝမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ ငါဘယ်လိုတော့ဘူးမသိဘူးဆိုတာဝန်ခံတယ် ဒီနေ့အသက်တာပဲ။ ”
တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်သိကျွမ်းရန်အချိန်ယူရမည်ဟုကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်။ ကျွန်ုပ်အားလုံးကျော်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်နိုင်ပြီး ၁၀ မိနစ်အတွင်းအလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ခံစားခကျြမြားနှငျ့အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှ။ ငါဘယ်လိုတော့ဘူးမသိဘူးဆိုတာဝန်ခံတယ် ဒီနေ့ဘဝပဲ နေရာတိုင်းမှာ။ ကွဲပြားခြားနားသင့်တယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ကြဘူး။
Missouri ပြည်နယ်၊ Kansas City မှ Kathy နှင့် Matt Karsten က PIED သည်စုံတွဲတစ်တွဲအနေနှင့်သူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောတိုက်ပွဲများစွာအနက်မှတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည်အာဖဂန်နစ္စတန်သို့ပြောင်းရွှေ့စဉ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုအားကိုးခဲ့သည်။ သူက၎င်းကို“ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်အတွက်၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်ခဲယဉ်းသည်” ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ကေသီ Karsten arousal အဘို့, မိတ်ဆွေအပါအဝင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေရာပေါင်းများစွာ, အသုံးပြု, ဒါပေမဲ့သူကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသူမ၏ခင်ပွန်းသဘောပေါက်ပြီးနောက်လိင်သူ့ကိုယ်သူသံသယမှစတင်ခဲ့သည်။
LifeZette ကိုသူမအနေနှင့်အမြဲတမ်းတွန်းထုတ်။ ငြင်းပယ်ခံရခြင်းသည်အလွန်နာကျင်စေခဲ့သည်။ "ငါသည်အမျက်ထွက်ခဲ့သည်။ နေ့တိုင်းငိုခဲ့တယ် တခြားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝေးကွာသွားတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နားမလည်နိုင်ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူ့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုနဲ့ဂုဏ်ယူမှုပျောက်သွားပြီးသူလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ”
"ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသံသယတွေဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပျက်သဘောမြင်လာစေတယ်" လို့ Matt Karsten ကပြောပါတယ်။ “ porn မပါပဲအော်ဂဇင်ကိုကျွန်တော်မရခဲ့ဘူး။ တကယ်တမ်းရင်းနှီးမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး။
ဒီဇနီးမောင်နှံဟာအရင်ကထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာခံစားရသည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ သူတို့သည်အခြားစုံတွဲများကိုကူညီရန်ဘလော့ဂ်များစွာကိုစတင်ခဲ့ပြီးပြandနာနှင့် ပတ်သက်၍ စုံတွဲများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုဖြေလျှော့လိုကြသည်။
၀ ါရှင်တန်ဒီစီမှဆန်ဒီယိုင်လာသည်သူမ၏ဆက်ဆံရေးတွင်ကံမကောင်းပါ။ သူမ၏ခင်ပွန်းဟောင်း၏လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုသည် PIED ဖြစ်လာပြီးလုံးဝစွဲလမ်းသောကြောင့်သူမ၏ပထမဆုံးအိမ်ထောင်ရေးအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူမကိုယ်တိုင်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းအားဖြင့်သူမခင်ပွန်းကြုံတွေ့နေရသည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်သူမအကြားယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အပြုအမူများကိုမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါကစွဲလမ်းမှုရှုပ်ထွေးမှုများကိုသူနားလည်လာခဲ့သည်။
ယနေ့ Iyler ရဲ့ဒုတိယလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။
“ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအသစ်အဆန်းတွေကိုစမ်းသပ်ရတာပျော်တယ် သို့သော်လည်းငါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးအတွက်သိသိသာသာခြားနားချက်အကြီးမားဆုံးခြားနားချက်ကပြောပါလိမ့်မယ်။ ငါ့မှာရိုးသားပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရင်းနှီးတဲ့ဘဝရှိတယ်။ ”
Pat Baron အဆိုပါကိုယ်ပိုင်တိုင်းတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် credentialed နည်းပြနှင့်စာရေးဆရာကိုကိုက်ပါ! client များအစားအစာစှဲအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကူညီပေးသည်သူကိုအောက်မေ့ခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်စားများအတွက် bodycentric Re-ပညာရေးပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။